Qaad ka dagay soomaaliya – Biyacade
September 6, 2016 September 7, 2016 biyacade
Qaad ka dagay soomaaliya
waxaa warbaahinta la hadlay wasiir jingili asagaa sheegay in soomaaliya wax qaad ah ka soo dagi karin laga bilaabo talaadada balse haatan magaalada Gaalkacyo waxaa buux dhaafiyay qaad ka yimid kenya.
Tani waxeey waji gabax ku tahay Dowlada dhexe ee soomaaliya oo aan laheeyn awood ay ku maamusho hawadeeda.
Isla shalay waxaa ka soo horjeestay warka wasiirka Maamulka Somaliland iyo pundland oo caada u ah had iyo jeer in ay khilaafaan nidaamka soomaaliya.
Si kastaba qaadka ayaa ka soo dagay Qardho,Gaalkacyo iyo laascaanood.
Wixii war ah ee ku soo kordha waxaad kala socon doontaan boggayada ee ah jaceeylka wordpress.com
Previous  ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
Next Waa maxaay Ontor?